Aza very ny feonao | Martech Zone
Aza very ny feonao
Alahady 10 Febroary 2013 Alahady, Martsa 24, 2013 Douglas Karr
Nahazo fanehoan-kevitra avy amina olona vitsivitsy aho izay ny lahatsoratray farany teo maina. Tsy hiady hevitra amin'izany aho - sahirana izahay nanao fikarohana lalindalina kokoa momba ny fitaovana sy ny endri-javatra tamin'ny tara. Toa hoe rehefa lalindalina kokoa ny fikarohana ataontsika dia vao mainka sarotra ny manoratra lahatsoratra fohy iray izay manao ny rariny amin'ny sehatra nefa mbola miantoka ny feonao hatrany.
Ity namako iray ity dia mpamaky mazoto amin'ny bilaogy ary manoratra ihany koa ao aminy, ka mihaino aho ary hanao fanovana vitsivitsy. Isaky ny lahatsoratra tsirairay dia hanampy loko hafa amin'ny resaka miaraka aminao aho. Martech Zone maka fomba fijery be fanantenana amin'ny fomba hanampian'ny teknolojia ny mpivarotra. Ny mahatsikaiky dia tsy dia be fanantenana aho. Mahatsapa aho fa toa malalaka sy manify ny sehatry ny fitaovana hanampiana antsika - miaraka amin'ny fanararaotana bebe kokoa ho an'ny rafitra marketing eo amin'ny sisin-tany izay manampy antsika mivory, mandrefy ary manatsara ny fifandraisanay amin'ireo vina sy mpanjifa.
Izahay koa dia mieritreritra ny hanampy feo bebe kokoa Martech Zone. Heveriko fa misy fotoana hanampiana saina marketing na teknolojia lehibe izay mety ho eo akaikin'ny ivom-pivarotana lehibe any New York, Boston, na San Francisco. Raha mpanoratra teknolojia ianao… indrindra ny iray izay mahatsikaiky, tianay ny hiresaka aminao. Ny fitadiavantsika hatreto dia tsy niteraka fitarihana firy.
Miverina amin'ny làlana…
Ny atiny dia tsy tokony hosoratana hanoratra atiny fotsiny. Azonao atao ny mahatsikaritra fa mivoaka sy mikoriana ny atiny. Ny sasany amin'izy io dia vokatry ny asantsika, fa matetika kokoa noho izany dia resaka fotsiny tsy fananantsika zava-dehibe holazaina. Tianay ny lahatsoratra bilaogy rehetra hanampy ny mpivarotra. Isaky ny lahatsoratra.
Ary koa, nanitatra ny feonay tamin'ny podcast, programa mailaka ary horonan-tsary izahay. Nanatevin-daharana ekipa izahay Edge an'ny Radio Web hamoaka fandaharana amin'ny radio matihanina (alefa eo an-toerana) miaraka amina horonan-tsary mahafinaritra. Aza hadino ny miditra ao - afaka miditra aminay amin'ny alàlanay ianao IPhone app, iTunes, Stitcher ary Youtube.
Tsy azoko antoka hoe iza no nanoratra ny teny hoe “media sosialy”, saingy namirapiratra izy ireo. Media ny atiny… fa ny atiny tsy misy feo tsy ara-tsosialy, ara-drariny haino aman-jery. Aza very ny feonao. Ataovy eo amin'ny fiaraha-monina.
Tags: Podcast Marketingtoetrafombafeo
Ny doka amin'ny Twitter dia manampy mpanaraka $ 0.823 avy
Tena ao anatin'ny 1% -n'ny LinkedIn ve ianao?